Muusikada Google Play si rasmi ah ayey u dhimatay | Androidsis
Waxaan ka hadlaynay Google Play Music bilooyin badan, adeegga muusigga ee qulqulka Google oo lagu beddelay YouTube Music. Ka dib markii in ka badan hal sano la sugayay tan iyo markii lagu dhawaaqay kala guurka, Google waxay duugtay Play Music.
Haddii aad dalabka ku rakibtay oo aad marin u heshay, waxaa si toos ah loogu hagaajinayaa YouTube Music haddii aad horay u sii rakibtay wuxuuna muujinayaa boodhadh macluumaad ah oo aan ka aqrin karno Google Play Music inuu hadda yahay YouTube Music. Haddii aynaan rakibin, fariinta waa la soo bandhigi doonaa Google Play Music hadda lama heli karo.
Kaliya hoosta, waxay na ogeysiineysaa taas waan wareejin karnaa, oo ay ku jiraan liiska-muusiga iyo muusikada la soo geliyay wakhti xaddidan, oo muujinaya hoosta badhanka si looga soo wareejiyo xogtayada Google Play Music loona beddelo YouTube Music, iyada oo loo marayo websaydhka YouTube Music ee furmaya markaad gujiso badhankaas. Waa wax la yaab leh in aysan bixin xiriir si toos ah loogu soo dejiyo YouTube.
Maalintii ay Google u dooratay inay dhigto hal adeeg oo dheeri ah (waa hagaag, markan waxaan tixgelin karnaa inay runti beddeshay magaceedii iyo shaqooyin cusub oo lagu soo daray jidka) ayaa yimid, sidaa darteed hadda waad ka saari kartaa barnaamijka qalabkaaga, waa codsi la yaab leh wali waa lagala soo bixi karaa Google Play Store (ugu yaraan waqtiga daabacaadda qodobkan).
Markaad tirtirayso arjiga, dhamaan heesaha aad soo degsatay waa la tirtirayaa xaruntaada si aad u dhageysatid adigoon ku xirneyn internetka. Haddii sabab kasta ha noqotee, kama tirtiri kartid arjiga, waxaad u baahan doontaa inaad marin u hesho xulashooyinka arjiga oo aad nadiifiso khasnadda si aad ugu bannaanaato booskaaga ku yaal terminalkaaga ee isticmaalaya muusikada la soo dejiyey ee aadan mar dambe ku raaxeysan karin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Google Play Music ayaa si rasmi ah u dhintay
Huawei Mate 40 waa mid rasmi ah oo aan joogin barnaamijyada Google